'Feon-kira' nataon'i Jean Shin | Famoronana an-tserasera
Zava-dehibe ny vinyl mba hahafahany mihaino ny hira tsara indrindra an'ny The Beatles, ireo lalina volomparasy miaraka amin'ny Highway Star na ny punk an'ny Sex Pistols ho tendron'ny iceberg izay mozika hatrany amin'ny karazan-javamaneno isan-karazany.
Eo no miditra ity sanganasa kanto nataon'i Jean Shin ity. mandrafitra onja noforonin'ny vinyl an-jatony mifanindry. Fomba iray hanehoana ny fandalovan'ny mpanelanelana efa tonta amin'ny fiainana tsara kokoa mamela ny toerany ho an'ireo mpilalao haino aman-jery na serivisy mivantana amin'ny alàlan'ireo finday avo lenta sy takelaka manenika ny tany rehetra tsy misy ahiahy.
Jean Shin dia nanonona ny sangan'asany ho andiana kapila vita sokitra voasokitra mba hamorona onja eo an-tampon'ny tampony, toy ny surfer iray efa ho raisina miaraka amin'ny latabatrao. Ny firafitra vokatr'izany dia miresaka ireo endrika teknolojia tsy azo ihodivirana izay mamela ireo haino aman-jery lasa lany andro amin'ny fotoana. Sombin-javatra izay maneho ihany koa ny maha-zava-dehibe ny mozika sy ny mozika ankafizin'ny olombelona.
Una asa tafiditra ao anaty klika, noho izany dia azo tsikeraina ampahibemaso izy satria kely sisa ny fialàn'ny mpijery azy mba hanandramany hamoaka ny fehin-kevitr'izy ireo, na dia hanatanterahana izany foana aza. Afaka omena tsiny izy noho ny fampisehoana azy tamin'ny famahana tsotra izao ny saika ny zavatra ho an'ny mpijery.
Shin dia manana tolo-kevitra mahaliana hafa azonao fantarina ny tranonkalanao manokana ary apetraka toy ny mpanakanto iray amin'ny sary amin'ny firaketana samihafa hahatratrarana vokatra tsara na hijanona amin'ny zavatra azontsika antsoina hoe cliché.
Ary tsy manakaiky an'i Banksy Pero eny manana ny heviny izy mba hanakaikezana kokoa ny sangan'asany amin'ny famoronana samihafa satria hita ao amin'ny tranokalany izay ahitantsika vitsivitsy hanasongadinana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Wave of Sound' nataon'i Jean Shin